Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် အလင်းပေးစက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် အလင်းပေးစက် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
SHINYU LIGHT CO., LTD. ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ အလင်းပေးစက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တွင်သာလွန်သောအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကုန်ကြမ်းကိုအသုံးပြုကြသောစျေးကွက်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောစျေးသည်များကနေဖြစ်ပြီးရရှိလာသောဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကြာကြာဝန်ဆောင်မှုဘဝနှင့်အရည်အသွေးသေချာစေရန်အမိန့်မှာကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံနှုန်းများကိုတစ်ဦးလျှင်အဖြစ်ထိပ်ဆုံးတန်းကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. ထိုထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ကျနော်တို့အများစုတတ်နိုင်သောဈေးနှုန်းများမှာ 'ငါတို့ client များသည်စက်ကိရိယာကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအကောင်းဆုံး efficiency နဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များရှည်လျားနောက်ဆုံးရေရှည်တည်တံ့သောစွမ်းရည်နှင့်အတူဖောက်သည်များစိတ်ကျေနပ်စေကြောင့်လူသိများကြသည်။ အရည်အသွေး `အဟထိုထုတ်ကုန်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့တောင်းဆိုခဲ့သည်ကြသည်။
ပုံစံ - U5 SBSL 80-250W
အတိုင်းအတာ:L344x W180x H225mm(250W)
အလေးချိန်:၅.၈ ကီလိုဂရမ်(ပါဝါအပါအ ၀ င်)
Luminous flux LED:100~150 Lm/W(ရိုက်ပါ.5700K)
LED အလင်း Lumens:4800/7200/9600/12000/14400/18000/24000/30000 lm(ရိုက်ပါ.5700K)
အဓိကအားဖြင့်ဖန်မှန်ဘီလူးနှင့်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းအိုးတို့ကို အသုံးပြု၍ ဘေးကင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်
ငွေ့ကုန်သည်ကြီးများအသင်းစနစ်အတွက်မူပိုင်ခွင့်,၅၀,နာရီ 000 သက်တမ်း,အနိမ့်တောက်ပယိုယွင်းအတူ.
အချိုးကျမှန်ဘီလူးပုံစံ(Beam ထောင့်:၁၀.15.38.56.95.132 ဒီဂရီ).
150 မှ 250W HID မီးခွက်များအစားထိုး.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.ledlightfixtures.org/my/light-projector.html
အလင်းပေးစက် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ အလင်းပေးစက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ